«Film» efa nandeha io | NewsMada
«Film» efa nandeha io
Raha misy firenena anjakan’ny sarimihetsika na “film”, anisany i Madagasikara ary tafiditra «Top 10». Maroloko ary amin’ny endriny samihafa ny isehoan’izany sarimihetsika izany. Ao ny “film d’action”, misy koa ny “film d’animation”, ny “film d’aventure”, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo.
Iarahan’ny fianakaviana na mpinamana na mpifankatia mijery sy hialana voly ary hakana fahafinaretana, any anaty efitrano, izy ireny. Etsy ankilany, misy ny sarimihetsika, tena iainan’ny vahoaka malagasy, amin’ny andavanandrony mihitsy. “Film d’horreur”, izay efa mahazatra ny besinimaro.
“Film” efa nandeha ary miverimberina hatrany, saingy tsy mankaleo. Tsy misy andro na iray aza tsy andrenesana vono olona sy fandrobana ary fanendahana, eto an-dRenivohitra sy manerana an’i Madagasikara mihitsy. Ny fizotrany sy ny ora isehoany ary ny mpilalao azy fotsiny no tsy mitovy fa ilay izy, “film” efa nandeha.
Misy koa nefa “film” efa mandeha foana, saingy mankarary maso sy mankadilo sofina indray aza ny mihaino azy. Anisan’ireny ny hoe : rarana, manomboka izao, ny fampiasana ireo “vitres fumées”, amin’ny fiarakodia sy ny tsy fametahana ny “ceinture de securité”, ny fifohana sigara ankalamanjana, ny fampiasana “gyrophare” sy ny hafa. Santionany ireo fa tsy ho ampy ny pejy raha hotanisaina eto avokoa ny zavatra andrarana ny Malagasy. Tsy vao izao akory no andrenesana izany fa efa hatramin’izay. “Film” efa nandeha io, mihatra ao anatin’ny iray volana, raha be indrindra, fa aorian’izay, ny teo ihany ny eo.
Na manao antso avo sy mandrahona amin’ny sazy henjana aza ny tomponandraikitra, tsy mihontsina na miraika, amin’izany intsony, ny vahoaka satria “film” efa nandeha. Ny mahamaika ny vahoaka izao, ny hahitana izay harotsaka ao am-bilaniny anio sy ny fampidirana ny mpianatra. “Film” efa nandeha io, saingy tsy mety lany tsiro.